Digital Video Broadcasting | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Posts Tagged ‘Digital Video Broadcasting’
ဘယ်ကလာပြီးဘာတွေလုပ်လို့ ဘယ်သွားမှာလဲ ဒီဗွီဘီ
အခုရက်ပိ်ုင်းအတွင်း အော်စလိုမှာDVB အသံလွှင့်ဌာန ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ခမ်းခမ်းနားနားလုပ်ဖို့ တာစူနေကြတယ်။ ပြည်တွင်းနဲ့ချင်းမိုင်၊ မဲဆောက် အခြေစိုက် DVB ၀န်ထမ်းတချို့ရော ဟိုးအစောပိုင်း DVB တည်ထောင်စ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ လူဟောင်းတွေကိုရောသတိတရ ဖိတ်ကြားပြီး မနက် ကိုးခွဲကနေ ညနေ လေးနာရီထိ ရှေ့ကြောင်းနောက်ကြောင်းတွေ ပြန်သုံးသပ်တင်ပြကြမယ်လို့ ကြားတယ်။ နော်ဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း စကားနည်းနည်းပြောမယ်ကြားတယ်။ဒီပိတ်ပွဲကို မြန်မာပြည်က စာရေးဆရာ ဂျာနယ်လစ်တချို့ကိုလည်း ဖိတ်တယ်..။ သတင်းထောက်တွေရောဆိုလူ ၂၀ကျော်မယ်ထင်တယ်။
Tags:Arts, BBC, Development, Digital Video Broadcasting, DVB-T2, Interactive, Radio Free Asia, Television
Arakan officials instructed to restrict Muslims’ travel
DVB: Arakan officials instructed to restrict Muslims’ travel
By AYE NAI
Muslim women in Arakan state’s Sittwe hold ID cards while they wait to cast ballots during the 2010 general elections. (Reuters)
Immigration officials in Burma’s restive Arakan state have been instructed by authorities to prevent all Muslims from travelling outside of their townships, according to local sources.
An immigration official in Sandoway township in southern Arakan state told DVB that authorities from the state government had called their department on the phone on Monday to pass on the order.
Tags:Burma, Digital Video Broadcasting, Muslim, Rakhine State, Rohingya, Rohingya people, Sittwe, Thandwe
ဆိုရှယ်လစ်ပါတီရဲ့ အောင်မြင် အကျိုးပြုခဲ့တဲ့လူရည်ချွန်စီမံကိန်း
LYC badges: refurvishing or remake
မဟာဗန္ဓုလရဲ့သား ဦးမောင်ကြီး အရပ်ခြောက်ပေ ဖြူဖြူထောင်ထောင်မောင်းမောင်းကြီး
Outstanding Student badge လူရည်ချွန် ရင်ထိုးတံဆိပ်ပုံ